नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : फेरी आएछ बडा दशैं । किन आउँछ होला दशैं तिहार ?
फेरी आएछ बडा दशैं । किन आउँछ होला दशैं तिहार ?
फेरी आएछ बडा दशैं । किन आउँछ होला दशैं तिहार ? बिदेशमा बिबसताको जालोमा घेरिएका निरीह म र म जस्ता लाखौंँ लाख नेपालीहरुलाई रुवाउन त होला नि जस्तो पनि लाग्छ । आज नेपालमा घटस्थापना रे ! आफु नेपालमा हुँदाका र त्यही बसेर आफन्तजन सँग सँगै बसेर दशैं मनाउँदाका पुराना क्षण सम्झिँदा भक्कानो छुटेर आउँछ । अनी एउटा लोक गायक भएको नाताले त्यो फिलिङ्सलाई गीतमा उतारेर सुरसुधाको संगीतमा मैले अमेरिकामै रचेको गीत हो यो गीत । नेपाल बाहिर रहेका, आफन्तजनबाट टाढा भएका सबैमा समर्पित यो दशैं गीत तपाईंका लागि । तपाईं सबैलाई दशैंको हार्दिक शुभकामना ।